अचम्मै भयो, एकाएक विप्लव पनि एमसीसीको पक्षमा गयो ! • raradiodarpan.com
अचम्मै भयो, एकाएक विप्लव पनि एमसीसीको पक्षमा गयो !
नेपाली राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुदैन भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी पास गरे देशभर आगो बाल्ने घोषणा गरेको केही दिन अघि मात्रै शान्तीपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा पनि एकाएक राष्ट्रघाती भनिएको एमसीसीको पक्षमा उभिएको हो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले एमसिसी सहयोग भए स्वीकार गर्न सकिने बताएका छन्। उनले शर्तबिनाको भए एमसीसी स्वीकार गर्न सक्ने बताएका हुन् । दाङको घोराहीमा शनिबार आयोजित युवा संगठनको भेलामा उनले शर्त राख्ने हो र स्वार्थका काम गर्न खोज्ने हो भने स्वीकार गर्न नसकिने बताएका हुन् ।
जनमतसंग्रह गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि कुरा राखेको उनको भनाइ थियो।
तर प्रचण्ड जनताका पक्षमा संघर्ष गर्न तयार भए आफूहरू सहकार्य गर्ने पनि बताए। ‘कांग्रेस, एमाले वा माओवादी जो तयार भए पनि सहकार्य गर्छौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरू सहकार्य गर्न चाहनुहुन्न। बरू हामीलाई पनि आफैँजस्तो सत्तामा पुर्‍याउन चाहनुहुन्छ, हामी उहाँहरूको सत्ता९प्रवृत्ति हेरेर वाक्क भइसकेका छौं।’
उनले संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेको दाबी पनि गरे। ‘जनतालाई ढाट्न संसदीय व्यवस्थाको कुर्सीमा जान सम्भव छैन,’ उनले भने। साथै उनले सरकारसँग गरिएका तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्टि पनि जनाएका थिए।